Anyị na-atụle ohere dị n'etiti Fusion Drive na SSD | Esi m mac
Carlos Sanchez | | ọtụtụ
Otu n'ime nnukwu obi abụọ mgbe ịzụrụ Mac na-ahọrọkarị n'etiti diski SSD ma ọ bụ họrọ maka ngwakọ Fusion Drive, ma ọ bụ ihe bụ otu: Oke ọsọ na-efu nke obere ohere ma ọ bụ a ngwakọ n'etiti agility nke a siri ike ala mbanye na ikike nke omenala ike draịva.
1 SSD bụ nhọrọ gị ma ọ bụrụ ...
2 Fusion Drive nwere mmasị na gị ma ọ bụrụ ...
SSD bụ nhọrọ gị ma ọ bụrụ ...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọsọ ọsọ nke ịnweta faịlụ na SSD ị nwere ike rute gbapụrụ ọsọ nke nọ na GB / s -Dị ka Mac na nhazi-, ọ bụ ezie na ihe nkịtị bụ na ọ na-akpali n'etiti 500 na 800 Mb / s. Anyị na-ekwu maka ọsọ ọsọ, ezigbo maka imeghe nnukwu RAW dijitalụ na-adịghị mma na Lightroom ma ọ bụ maka imeghe ọtụtụ vidiyo vidiyo na-enweghị echere n'agbanyeghị agbanye faịlụ ahụ buru ibu. Site na iwepu akụrụngwa ọ bụla, oge ịnweta na-ebelata nke ukwuu iji nye echiche nke adịghị adị n'oge ụfọdụ.
Fusion Drive nwere mmasị na gị ma ọ bụrụ ...
Ọ bụrụ na ịchọghị ida ngwa ngwa faịlụ ma chọọ ikike karịa ihe a na-ahụkarị na SSD, ị kwesịrị ịga maka Fusion Drive, nke bụ ihe ọ bụla karịa ngwakọ na akụkụ SSD na akụkụ diski ike ot. N'ihi nchikota a, Apple ejirila OS X rụọ ọrụ na-akpaghị aka itinye faịlụ ndị anyị jiri nke kachasị na ebe nchekwa siri ike, ebe ndị pere mpe ejiri ma ọ bụ ndị nwere ike ịnweta nwayọ na-aga HDD Maka onye ọrụ nke na-achọghị nnukwu arụmọrụ, ọ nwere ike ịdị mma ebe ọ na-enye anyị ohere karịa ohere karịa SSD na ọnụahịa na-enweghị ịkwụsị nnyefe dị elu na nnweta nnabata kpamkpam. N'ezie, mgbe anyị juputara diski ahụ, nwayọ nwayọ na-apụtawanye ìhè, n'ezie.
Dịka echiche nke onwe, M M na-aga maka nchekwa SSD dị ọcha maka ọsọ ya na ntụkwasị obi ya, na-eche na ọ bụrụ na achọrọ ohere karịa enwere nhọrọ nke ịzụta mpụga Thunderbolt ma ọ bụ USB 3.0 diski.
Ma Fusion Drive bụkwa a nhọrọ kacha mma n'ihi na ya egosipụta na n'ihi na ndị magburu onwe management na Apple na-eme nke Nchikota ma ụdị nke diski, otú na njedebe nhọrọ na-adabere kpamkpam ihe aga-eme na-rụrụ na Mac na na mmasị gị n'etiti arụmọrụ na ikike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mgbe ịzụrụ Mac: Fusion Drive ma ọ bụ SSD?
Enwere m otu obi abụọ ahụ wee gawa maka ụlọ ọrụ siri ike, ihe kpatara ya? Anaghị m ahụ nke ọma, na enweghị m ike ijikwa faịlụ ndị na-aga na diski ọ bụla, yana nke ka njọ, mgbe ntọala siri ike jupụtara, ọ gaghịzi bupụrụ ihe ọzọ, mgbe ahụ Fusion Drive m, ọ ga - abụ diski nkịtị
Zaghachi Jhoan Medina
Njikọ njikọ ahụ dị ka mwakpo 0, yabụ, ọ bụrụ na diski mebiri emebi ị ga-efunahụ ihe niile.
"Mgbe draịvụ siri ike juputara, enweghị ike iwepụ ya ọzọ, mgbe ahụ Fusion Drive m ga - abụ diski nkịtị"
SSD na-arụ ọrụ dị ka oghere. Na SSD, sistemụ ahụ na-ahapụ faịlụ ndị kachasị mee ihe, ndị ejiri ya rụọ obere ga-aga HDD. Ihe niile na akpaghị aka.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịghara iche banyere ebe ị hapụrụ faịlụ, ọ bụ ihe niile akpaka (styledị Apple kachasị),
OWC weputara 1TB SSD ohuru maka MacBook Air